Khasaaraha Ka Dhashay Weerarkii London Oo Sii Kordhay – Goobjoog News
Khasaaraha Ka Dhashay Weerarkii London Oo Sii Kordhay
Waxaa kordhay khasaaraha ka dhashay weerar ka dhacay xarunta baarlamaanka UK ee magaalada London, waxaana ku dhimatay 5 qof oo uu ku jiro qofkii weerarka soo qaaday sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 40 kale.
Weerarkaan ayaa waxaa cambaareeyay Ra’iisul wasaaraha waddanka Uk Theresa Mary May waxayna ku tilmaantay weerar argagixiso, booliska UK ayaa waxay sheegeen in ninka weerarka geestay la aqoonsaday.
Weerarka ayaa waxa uu kusoo beegmay xilli ay ku jireen xarunta baarlamaanka UK, waxayna lahaayeen kulankooda Todobaadlaha ah.
Dhanka kale mas’uuliyiin u dhalatay waddanka Faransiiska ayaa waxay sheegeen in Saddex arday oo u dhalatay waddanka Faransiiska uu dhaawacyo uu ka soo gaaray weerarkaan, sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Kuuriyada Koonfureed ayaa iyadana waxay sheegtay shan qof oo muwaadiniin Kuuriyaan ay dhaawacyo soo gaareen.
Golaha wasiirada Soomaaliya oo meel mariyay xeerka saxaafadda
Xaliimo Yareey oo Ku Dhawaaqday in Guddiga Doorashooyinka uu Sii Shaqeynayo
Dznekt yupevw generic cialis is there a generic cialis
Orblfp sqccwj cialis online canadian pharmacy
Большое количество из скважин после осуществления восстанови...
buy sildenafil online https://sildgeneric100.com/ sildenafil...
writing a speech for a wedding term paper writer essay writi...